Khilaaf waji cusub leh oo ka dhextaagan dowladaha Turkiga iyo Mareykanka | TOP NEWS
Khilaaf waji cusub leh oo ka dhextaagan dowladaha Turkiga iyo Mareykanka
Dalalka Maraykanka iyo Turkiga ayaa todobaadkan mid walba dhankiisa ugu dhawaaqay inay joojiyeen fiisada dal ku gal (VISA) oo ay siin jireen muwaadiinta labadaasi dal.
Xiisadan ayaa ka dhalatay kadib markii todobaadkii hore ay ciidamada booliiska Turkiga ay xabsiga dhigeen sarkaal u shaqeeya Qunsuliyada Maraykanka ku leeyahay magaalada Istanbuul.
Sarkaalkaasi ka tirsan Qunsuliyada Maraykanka oo lagu magacaabo Metin Topuz ayaa asal ahaan kasoo jeeda Turkiga, waxayna dowlada Turkiga ku eedaysay inuu ninkaasi wax ka ogaa inqilaabkii fashilay ee dalkaasi ka dhacay sanadkii lasoo dhaafay.
Booliiska Turkiga ayaa sidoo kale xiray qoyska sarkaal labaad oo isaguna u shaqeeya safaarada Maraykanka kaasi oo isaguna kasoo jeedo dalka Turkiga. Labadan sarkaal ee Turkida ah oo u shaqeeya Safaarada Maraykanka ayaa lagu eedeyey inay xiriir la leeyihiin wadaadka ku nool Maraykanka Fettullah Gulen oo lagu eedeeyey inuu ka danbeeyey afgembigii la doonayey in xilka looga tuuro Madaxweyne Erdogan.
Go’aanka Maraykanka ay ku joojiyeen fiisooyinka dal ku galka ay siin jireen muwaadiniinta Turkida ayaa waxaa si weyn uga carooday dowlada Turkiga oo iyaduna ku dhawaaqday todobaadkan inay joojisay fiisooyinkii ay siin jireen muwaadiniinta Maraykanka ee dalkooda soo booqanaya.
Xiisadan ayaa saameyn ku yeelan doonta dadka dalxiiska u taga Turkiga ee ka imaanaya Maraykanka iyo waliba shaqaalaha Maraykanka ee ka hawlgala saldhigyada militari ee uu Maraykanka ku leeyahay wadanka Turkiga.
Xiriirka labadan dal oo ka wada mid ah Isbaheysiga NATO ayaa sii xumaanayey tan iyo intii uu dhacay inqilaabkii fashilay ee sanadkii hore, kadib markii Turkiga uu ka codsaday Maraykanka inuu usoo gacan geliyo wadaadka Gulen, codsigaasi oo aysan dowlada Maraykanka illaa iyo hada ka jawaabin.
Khilaaf waji cusub leh oo ka dhextaagan dowladaha Turkiga iyo Mareykanka added by Tifaftiraha Somalida Maanta on October 11, 2017